The Rohingya News Bank : 2019
Suu Kyi chooses to beaNational hero, not International darling
Dr Nehginpao Kipgen
On Dec 11, Myanmar’s State Counselor-cum-Foreign Minister Aung San Suu Kyi (pix) stood at the podium of the International Court of Justice (ICJ) at the Hague and defended her country against the accusation of violating the 1948 Genocide Convention over the military’s clearance operations in northern Rakhine state which caused more than 700,000 Rohingyas to flee the Southeast Asian country for Bangladesh.
Labels: 2019, Article, DASSK, en, National Hero
Labels: 2019, en, Gambia, Genocide Case, Myanmar, News, West's Failure
Suu Kyi no shoo-in at Myanmar’s 2020 polls
Bertil Lintner, Yangon
Myanmar’s State Counsellor Aung San Suu Kyi looks on before the UN’s International Court of Justice on December 11, 2019 in the Peace Palace of The Hague. Photo: AFP/Netherlands Out/ Koen Van Weel
2020 elections will show how much damage has been done to leader’s reputation asademocratic reformer
A new huge billboard recently erected atamajor intersection in Myanmar’s commercial capital of Yangon portrays the nation’s nominal leader withamessage of support: “We stand with Daw Aung San Suu Kyi.”
Labels: 2019, 2020, Article, Bertil Lintner, DASSK, en, Myanmar, Polls
ဦးပိုင် နဲ့ ဖက်စပ်လုပ်မှု သြစတြေးလျ ဘီယာကုမ္ပဏီ ပြစ်တင် ခံနေရ
သြစတြေးလျနိုင်ငံက Lion Little World ဘီယာကုမ္ပဏီကို မြန်မာ့တပ်မတော်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်မှုအတွက် နိုင်ငံတကာက ဝေဖန်ပစ်တင်နေကြပါတယ်။
အဲဒီ ဘီယာကုမ္ပဏီဟာ ဂျပန်နိုင်ငံက ကမ္ဘာကျော် ယမကာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Kirin ကီရင်ရဲ့ လက်
အောက် ခံဖြစ်ပြီး Kirin ကုမ္ပဏီဟာ တပ်မတော်ရဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဘီယာတွေ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, သြစတြေးလျ, ဘီယာကုမ္ပဏီ, သတင်း, အပြစ်တင်, ဦးပိုင်
မြန်မာလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ကုလရှုတ်ချ
28 ဒီဇင်္ဘာလ၊ 2019
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ ကျင်းပသည့်မြင်ကွင်း။ (ဓာတ်ပုံ - UN)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေနဲ့ တခြားလူနည်းစုတွေအပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု တွေအ ပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြစ်တင်ရှုတ်ချတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တရပ်ကို ကုလသမဂ္ဂက ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ကုလ သမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ မနေ့တုန်းက မဲခွဲခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ပယ်ချခဲ့တာ ပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ကိုအောင်လွင်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
Labels: 2019, mm, ကုလသမဂ္ဂ, ဗွီအိုအေ, မြန်မာ, ရှုတ်ချ, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကုလအဆိုကို မြန်မာအစိုးရ အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်
ရိုဟင်ဂျာတွေဒုက္ခသည် ၇ သိန်းကျော် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာခိုလှုံနေတယ်လို့ ကုလက ပြောပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ကုလသမဂ္ဂ က ရှုတ်ချကြောင်း အဆို တစ်ရပ်ကို မြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်က အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။
ကုလဌာနချုပ်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်က ကျင်းပတဲ့ ၅၂ ကြိမ်မြောက် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာ တတိယ ကော်မတီ အဲဒီအဆိုမူကြမ်းကို တင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာအစိုးရကန့်ကွက်ပေမယ့်အဆိုကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်အ တည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, RFA Burmese, ကုလသမဂ္ဂ, မြန်မာ, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်
ဂျပန်သံအမတ်ကြီး ပြောပြတဲ့ AA အကြောင်း
ဂျပန် သံအမတ်ကြီး အီချီရို မာရုယာမားကို‌ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က ‌တွေ့ရစဉ်
ဂျပန်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ အိချီရို မာရုယာမ Ichiro Maruyama က ၂၀၀၉ -၂၀၁၀ ဝန်းကျင်က ဖွဲ့စည်း လိုက်တဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA အဖွဲ့ ဘာလို့အင်အားကြီးထွားလာသလဲဆိုတဲ့ မေခွန်း သူ့မှာရှိကြောင်း RFA နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ်မှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, RFA Burmese, Video, ဂျပန်သံအမတ်ကြီး, သတင်း
မြန်မာနိုင်ငံကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ဆုံးဖြတ်
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကို ၂၀၁၉၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့က ကျင်းပစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေနဲ့ အခြား လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာ၊ ဖမ်းဆီးတာ၊ နှိပ်စက်တာ၊ အဓမ္မပြုကျင့်တာ၊ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားစဉ် သေဆုံးခဲ့တာတွေ အပေါ် ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံက မနေ့က ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, RFA Burmese, ကုလသမဂ္ဂ, ပြစ်တင်ရှုတ်ချ, မြန်မာ, သတင်း
International Crisis Group urges Bangladesh to shift sights to long-term plans for Rohingya
The International Crisis Group has urged Bangladesh to shift its focus to long-term plans for the Rohingya and their hosts instead of restricting the humanitarian response to meeting the refugees’ immediate needs.
The refugees are unlikely to return to their homeland in the near or even medium term, but Bangladesh’s policy toward the Rohingya remains focused on near-term repatriation out of fears that long-term plans will ease pressure on Myanmar, the ICG said inareport on Friday.
Labels: 2019, Bangladesh, en, ICG, News, Rohingya
Labels: 2019, Condemn, en, Human Rights, Myanmar, News, Rohingya, UNGA
Tens of thousands of Rohingya fled Myanmar for refugee camps in Bangladesh
The UN General Assembly has approvedaresolution condemning human rights abuses against Muslim Rohingya and other minorities in Myanmar.
The resolution also calls on Myanmar to stop the incitement of hatred against the Rohingya and other minorities.
Labels: 2019, BBC, Condemn, en, Human Rights, News, Rohingya, UNGA
ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ဖိနှိပ်မှုတွေ ရပ်ဆိုင်းဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကို ICG ပြောကြား
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကုတုပလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းက ရိုဟင်ဂျာတွေကို ၂၀၁၈ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်
Photo: Dibyangshu SARKAR / AFP
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရအနေနဲ့ သူတို့နိုင်ငံမှာ လာရောက်ခိုလှုံနေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ် ကန့်သတ် ထိန်းချုပ်မှုတွေ ပိုမိုလုပ်ဆောင်နေတာကို ရပ်ဆိုင်းဖို့ ICG နိုင်ငံတကာ ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့စွဲနဲ့ အစီရင်ခံစာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, ICG, mm, RFA Burmese, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, သတင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မြန်မာဘာသာ ပြန် ဝေါဟာရ(၂)ရပ်
စာပေဗိမာန်ဘာသာပြန်စာပေ စာတမ်းဖတ်ပွဲကို ဧပြီ ၂၉၊ ၃ဝ နှင့် မေ ၁ ရက်တို့မှာ ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတယ် လို့ သိရပါတယ်။
ဘာသာပြန်စာတမ်းဖတ်ပွဲ မပြုလုပ်မီတစ်လခန့်အတွင်းမှာပဲ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ (International Law) နှင့်စပ်လျဉ်း၊ ဆက်စပ်ဟန်ရှိပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှ မြန်မာဘာသာစကားသို့ ပြန်ဆိုထားတဲ့ (သို့မ ဟုတ်) ဆီလျော်အောင်အသုံးပြုထားတယ်လို့ ယူဆဖွယ်ရှိပြီး လောလောလတ်လတ် သတင်းများ အ တွင်းမှာ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ စကားရပ်နှစ်ရပ်အကြောင်းကို တင်ပြလိုပါတယ်။
Labels: 2019, mm, ဥပဒေဝေါဟာရ
လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု GENOCIDE ကို လေ့လာခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံအရေးကို နိုင်ငံတကာက ပြောကြဆိုကြစွပ်စွဲကြတဲ့အခါ သုံးနှုန်းတဲ့စကားလုံးတစ်ခု မကြာခဏ ကြားနေရမည် ထင်ပါသည်။ အစိုးရကလည်း ဒီစကားလုံးကို မသုံးဖို့၊ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို ပြင်း ပြင်းထန် ထန် ကန့်ကွက်နေသည့် Genocide (ဂျီနိုဆိုက်)ဆိုတဲ့ စကား လုံးပါ။ ဘာဖြစ်လို့ နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်း၊ အထူးအားဖြင့် နိုင်ငံတ ကာ မီဒီယာများနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွသည့်အဖွဲ့များ၏ ကိုယ့် ဘာသာ ခံယူ ထားသူများက ဒီစကားလုံးကို အထူးပြုသုံးချင်ကြတာလဲ။ ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်လို့လဲ။ ဘာ ကြောင့် ဒီစကားလုံးကို မသုံးသင့်တာလဲ။ နိုင်ငံတကာအရေး လေ့လာသူများအနေနှင့် မဖြစ် မနေ သိသင့် သည့်စကားလုံး ဖြစ်သော်လည်း သာမန်ပြည်သူများ အနေနဲ့ အတိမ်အနက်ကို နားလည်ချင်မှ နားလည်လိမ့် မည်။ သို့သော် အများက ဤကို ကျွဲဖတ်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ ကိုယ့်ဘက်က ကျွဲလား ဤလား ဘာကိုပြော နေတာ လဲ သိသင့်သည်ဟု မြင်ပါသည်။ အနည်းငယ် တူးဆွကြည့်မိပါသည်။
Labels: 2019, mm, ဂျီနိုဆိုက်, ဆောင်းပါး
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ရေရှည်အစီ အမံချဖို့ ICG တိုက်တွန်း
27 ဒီဇင်္ဘာ၊ 2019
ဘဂ်လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကော့ဇ်ဘဇားရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းမှ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ။ (သြဂုတ် ၂၂၊ ၂၀၁၉)
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေး အစီအစဉ်တွေ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သေးဘဲ ဖြစ်နေချိန်မှာ လက်ခံထားတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အနေနဲ့ ရေရှည်အစီအမံတွေ ချမှတ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ ပဋိ ပက္ခ လေ့လာရေးအဖွဲ့ (ICG) က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးကို ရေတိုပြဿနာအဖြစ် သဘောမထားဘဲ ရေရှည်အမြင်နဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေ လျှော့ပေါ့ပြီး နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်တွေ၊ လူသားချင်းစာနာမှု အဖွဲ့အစည်းတွေ ကူညီနိုင်အောင် လမ်းဖွင့် ပေးဖို့လည်း ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ တိုက်တွန်းထားတာပါ။
Labels: 2019, ICG, mm, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်, သတင်း, ရေရှည်စီမံကိန်း
အနောက်ကိုရွှေ့ အရှေ့ကိုမျှော်မယ့် ၂ဝ၂ဝ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (MIC) ဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမြင့်တက်ဖို့ ဒီနှစ်ထဲမှာ တွန်းတွန်းတိုက် တိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်တွေကိုလည်း ဒေသတွေအလိုက် များစွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးဖိုရမ်နဲ့ စီးပွားရေးတွေ့ဆုံပွဲတွေကို ရခိုင်၊ ဧရာဝတီ၊ ကရင်၊ ရှမ်း၊ တနင်္သာရီ၊ ချင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ကချင်ပြည်နယ် တွေမှာ အသီးသီးပြုလုပ်ခဲ့သလို နေပြည်တော်မှာလည်း မြန်မာ နိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ ၂ဝ၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ၄ ဒသမ ၁ ဘီလျံကျော်သာ ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တမ်း မှန်းခဲ့တာကတော့ ကန်ဒေါ်လာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလျံ ဝင်ရောက်ဖို့ပါ။
Labels: 2019, mm, MMT, ဆောင်းပါး
ICJ တရားရင်ဆိုင်ရပြီးနောက် စစ်တွေ ဒုက္ခသည်စခန်းများ ၏ အခြေအနေ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့ရှိ မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ နေထိုင်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူတွေကို သက္ကေပြင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနမှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ရက်က ဆေးကုသမှုပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။
ခုရက်ပိုင်းတွင်း ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာ မွေးစာရင်းတွေထုတ်ပေး တာ စတဲ့ လူသားခြင်းစာနာတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အစိုးရက ပိုမိုပြုလုပ်လာတာကိုကြိုဆိုပေမယ့် လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေသေးတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
Labels: 2019, mm, စစ်တွေမြို့, ဒီဗွီဘီ, ဒုက္ခသည်စခန်း, သတင်း
မြန်မာမှာ ဂျီနိုဆိုက်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ ဂျပန်အစိုးရ တပ်မ တော်ကို ဘာအကြံပေးသလဲ
26 ဒီဇင်ဘာ 2019
တပ်မတော်က လက်တွေ့ကျကျ အရေးယူပါလို့ ဂျပန်ပြော
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးမှာ နိုင်ငံတကာက စွပ်စွဲနေသလို လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တာတွေ မရှိဘူးလို့ ဂျပန်က ယုံကြည်တယ်၊ အဲဒီအတွက် နိုင်ငံတကာတရားရုံး အိုင်စီဂျေက ကြားဖြတ် စီမံဆောင်ရွက် ချက်တွေ ကို မပေးဖို့ မျှော်လင့်တယ်လို့ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်က ရန်ကုန်မြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, ဂျပန်, ဂျီနိုဆိုက်, ဘီဘီစီ မြန်မာ, သတင်း
မြန်မာပြည်မှာ လူမျိုးတုံးရှင်းလင်းမှု မရှိခဲ့ဟု ဂျပန်သံအမတ် ယူဆ
26 ဒီဇင်ဘာ၊ 2019
ဂျပန်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ အိချီရော့မာရုယာမ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီး ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့ စွပ်စွဲချက်ကို ICJ နိုင်ငံတကာ တရားရုံးမှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောာင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ဂျပန်နိုင်ငံက ထောက်ခံကြောင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု genocide အမှန် တကယ် မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာ ယုံကြည်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီးက ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက် သူ့နေအိမ်မှာလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မီဒီယာတွေကို ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီပွဲကို ကိုယ်တိုင်သွား ရောက် သတင်းယူခဲ့တဲ့ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် ကိုဇော်ထက်က ပြောပြပေးမှာပါ။
Labels: 2019, mm, Mr. Yamaguchi Natsuo, ဂျပန်သံအမတ်ကြီး, လူမျိုးတုံးရှင်းလင်းမှု, သတင်း
ဂျပန်က မြန်မာမှာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမရှိဟု ယုံကြည်
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု မရှိဘူးလို့ ဂျပန်အစိုးရက ယုံကြည်တာကြောင့် နိုင်ငံတ ကာ တရားရုံး ICJ အနေနဲ့ Provisional Measure ကြားဖြတ်အရေးယူမှု မချမှတ်ဖို့ ဆုတောင်းနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ အိချီရို မာရုယာမ Mr. Ichiro Maruyama က ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, Mr. Ichiro Maruyama, Video, ဂျပန်သံအမတ်ကြီး, လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု, သတင်း